Iphoyisa libambe umkalo eqhoqhobelwe wuzakwabo embhedeni | News24
Iphoyisa libambe umkalo eqhoqhobelwe wuzakwabo embhedeni
Harare - Iphoyisa elisebenzela eBulawayo lithi lashaywa ngunkosikazi walo ngemuva kokumbamba oqotsheni eqhoqhobelwe nguzakwabo ekamelweni labo.
UJastice Chenjerai utshele inkantolo ukuthi ufuna incwadi yokuzivikela kumkakhe uLeslie Mandindo.
"UMandindo uyangishaya njalo uma ngumbeka endleleni ngokungaziphathi kahle.
OLUNYE UDABA: Umyeni wami waquleka kathathu senza ucansi-Unkosikazi
"Sishadile noLeslie Mandindo kanti ubehlezi ethembekile ngaphambi kokumbamba ezitika ngocansi nozakwethu emzini wethu. Manje usegcwele udlame useyangishaya njalo uma ngizama ukumqondisa, egcina ukungibeka isandla bekungumhlaka-20 Ephreli.
"Wake wangihlaza phambi komphathi wami nozakwethu wangi"faka" impama nezibhakela umzimba wonke.
"Ngakho ngicela incwadi yokuzivikela kuye," kusho uChenjerai.
UChanjerai uphinde wathi uMandindo unomkhuba wokumkhiyela ngaphandle emzini wabo.
UMandindo eziphendulela uziphikisile izinsolo azibekwa ngumyeni wakhe wathi umqambela amanga.
"Akutshele le nkantolo akusilo iqiniso. Akakaze angibambe embhedeni nesoka futhi angimhlukumezi. Empelezi nguye ohlukumeza mina njalo ngokuhlezi engitshela ukuthi akasafuni ukuhlala nami," usho njalo.
Imansthi yenkantolo itshele uMandindo ukuthi akayeke ukuhlukumeza umyeni wakhe futhi ayeke ukumsongela, kubika iMyZimbabwe.